शब्दकोश: August 2014
सधैं पढिरहने तर कहिल्यै नसकिने किताब पनि हुने रैछ जीवनमा । जुन पढ्दा पढिसिध्याउने उद्देश्य राखिंदैन । बस् पढ्दै गइन्छ, सिलसिलेवार लय तोड्दै । कहिले पहिलो पानाबाट फाल हाल्दै ११औं पृ्ष्ठमा फड्को मार्न म न लाग्छ, कहिले हातमा लिनासाथै एकैचोटि पुछारको पृष्ठ पल्टाएर त्यहाँबाट बीचतिरको पृष्ठमा फर्किन पनि मन लाग्छ । किताब मन नपरेर यसरी पानाहरु छाड्दै उम्किएको हैन, मन परेर अझ नयाँ कुराको खोजीमा छटपटाएको हो ।
बीपीको ‘जेल जर्नल’ त्यस्तै किताब बनेको छ मेरो लागि । कहिल्यै आद्योपान्त छिचोलिएन । यस्तो किताब उपन्यास पढे जस्तो एक-एक पानाबाट अघि बढ्दै गइन्छ कि गइन्न खै ! पठन नियम पनि थाहा छैन ! किताब हात परेको समय २०६० सालदेखि यसैगरी पाना-पानामा छलाङ मार्दै दगुरिरहेको छु । फेरि, आफू निकै अल्छे र ढिलो पढ्ने पाठक परियो । एउटा किताबले मन खाएपछि अरुतिर हत्तपत्त आँखा नलगाउने । (यो पाठकलाई प्रेमिका छउन्जेल बाटामा हिंड्दा अन्य केटीतिर नजर लगाउने झन्झट पनि मन पर्दैनथ्यो एक समयमा । आफ्नो विशेष मान्छे छँदै छ भन्ने एकखाले ढुक्क ढकनी ! )
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, August 09, 20140: Comments